Kiimikooyinka dabiiciga ah, furfural, xasiliyaha kuleylka - Teknolojiyadda Tamarta cusub ee Shuiyuan
Shenxian Shuiyuan Teknolojiyadda Tamarta Cusub Co., Ltd. oo la aasaasay 2000, oo ku taal gobolka Shandong, waxaan nahay warshad soo saare oo ku takhasustay soo saarida Dibenzoylmethane (DBM) iyo furfural. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah wax soo saarka xirfadeed ee ugu weyn adduunka Dibenzoylmethane (DBM) oo leh awood sanadle ah 10,000 metrik ton, iyada oo ah mid ka mid ah soo saaraha xirfadleyda ugu weyn adduunka furfural lehna awoodda sanadlaha ah 30,000 metrik ton.
Waxaan ku adkeyneynaa tayada sheyga marka ugu horeysa waxaanan si adag u kormeernaa tayada wax soo saarka ee geeddi-socod kasta.
Warshadeenu waxay ku soo korodhay soo saaraha shahaadada koowaad ee dibenzoylmethane iyo furfural.
La aasaasay 2000, waxaan nahay warshad soo saare oo ku takhasusay soosaarka Dibenzoylmethane (DBM) iyo furfural.
Shenxian Shuiyuan Teknolojiyadda Tamarta Cusub Co., Ltd. oo la aasaasay 2000, oo ku taal gobolka Shandong, waxaan nahay warshad soo saare oo ku takhasustay soo saarida Dibenzoylmethane (DBM) iyo furfural.
152020 / Ogos
Xarunta Kiimikada ee Furfural
Isku-darka kiimikada Furfural Furfural (C4H3O-CHO), oo sidoo kale loo yaqaan 2-furaldehyde, oo ah xubinta ugu caansan qoyska furan iyo isha laga helo furan kale oo farsamo ahaan muhiim u ah. Waa dareere aan midab lahayn (dhibic karkaraya 161.7 ° C; culeys gaar ah 1.1598) ...
132020 / Ogos
Waa maxay Furfural?
Waa maxay Furfural? KC BRUNING Furfural waa kiimiko laga sameeyay maadada dabiiciga oo caadi ahaan loo soo saaro ujeedooyin warshadeed. Waxay asal ahaan ka kooban tahay wax soo saarka beeraha sida qolofta oat, buunshaha, galleyda, iyo balka. Qaar ka mid ah p ...
122020 / Ogos
Abstract Melanoma waxay ka dhigan tahay oo keliya 4% dhammaan kansarka maqaarka laakiin wuxuu ka mid yahay neoplasms-ka ugu halista badan. Dacarbazine waa daawada xulashada daaweynta melanoma ee Brazil iyada oo loo marayo nidaamka caafimaadka dadweynaha badanaa sababtoo ah qiime jaban. Si kastaba ha noqotee, waa alkyl ...